आइओएमले सार्वजनिक गर्‍यो एमबिबिएसको नतिजा, कुन कलेजबाट कति पास? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
आइओएमले सार्वजनिक गर्‍यो एमबिबिएसको नतिजा, कुन कलेजबाट कति पास?
स्वास्थ्यखबर बिहीबार, मंसिर २, २०७८, २१:०१:००
काठमाडौं- त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) एमबिबिएस अन्तिम वर्षको नतिजा प्रकाशित गरेको छ। आइओएमले एमबिबिएस थर्ड फेज पाँचौ वर्षको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो।
सार्वजनिक नतिजा अनुसार महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसबाट ६८ जना उत्तीर्ण भएका छन्।
युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भैरहवाका ६४, नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जका ८७, जानकी मेडिकल कलेजका ८, किष्ट मेडिकल कलेजका ९१, चितवन मेडिकल कलेजका ६५, नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजका १०३ जना र गण्डकी मेडिकल कलेजका ४० जना उत्तीर्ण भएका छन्।